विराटनगरको कर घटेकोमा कसले के भने ? निर्णयको सवै वर्गबाट स्वागत - Birat Sandesh
विराटनगरको कर घटेकोमा कसले के भने ? निर्णयको सवै वर्गबाट स्वागत
बुधबार, साउन ३०, २०७५ मा प्रकाशित
.विराटनगर ३० साउन । कर वृद्धि गरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको सत्ताधारी नेकपाले विराटनगर महानगरको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ । सडक संर्घषमा उत्रने चेतावनी दिइरहेको बेला कर घटाएपछि नेकपा नगर समिति विराटनगरले आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो । नेकपा विराटनगर नगरसमितिका अध्यक्ष सागर थापाले निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताए । सवै निर्णय हामीले हेरिसकेका छैनौ उनले भने , “जति बुझेका छौ त्यसलाई हामी आलोचनात्मक समर्थन गछौ । ” नेकपा नगरसमितिले असारको अन्तिम साता महानगर प्रमुख भीम पराजुलीलाई ७ दिने अल्टिेमेटम दिएर कर घटाउन दवाव दिएको थियो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको चौतर्फी दवाव परेपछि जनप्रतिनिधिले मंगलवारको बोर्ड बैठकबाट ५० प्रतिसत कर तथा सेवा शूल्क घटाइएका छन । नगर अध्यक्ष थापाले भने , “हामीले प्रस्तुत गरेको प्राय सवै कुरा सम्बोधन हुने गरि कर घटेको छ ।” तथापी हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको छैन । उनका अनुसार “ निर्णय सवै हेरेपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गर्ने वा नगर्ने बारेमा टुंगोमा पुग्छौ । ”
अर्थशास्त्री प्रा.डा भेषप्रसाद धमलाले सवैलाई अनुभूति हुने गरि कर घटाएकोमा महानगर नेतृत्व प्रशंसाको पात्र बनेको प्रतिक्रिया दिए । नगरबासीको मनोभावना बुझेर कर घटाएको छ प्रा.डा धमलाले भने ,” यसलाई मैले सकारात्मक लिएको छु । ”
महानगरमा स्रोतको अभाव निश्चय छ उनले भने , यही स्रोत संकलन गरेर नगरको विकास गर्ने भएपनि यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट कर बढाउन सकिन्थ्यो । स्रोत नमारि जनतालाई सहज हुने गरि कर घटाएको आफूले पाएको बताए । धमलाको महानगरलाई सुझाव थियो ,“ कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुपूर्व पर्याप्त वहस र छलफल गर्न भने जरूरी छ । यसरी गरिने निर्णयले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेे धमलाको कथन थियो ।
यता संयुक्त टोल नगर समन्व्य समितिका अध्यक्ष राजेश मास्केले महानगरको निर्णयको स्वागत गरेका छन । जनताको पक्षमा गरिएको यो निर्णय स्वागत योग्य छ मास्केले भने , “सवै निर्णय हेर्न बाँकी रहेकोले धेरै प्रतिक्रिया दिने समय आइसकेको छैन ।” कर वृद्धिको विरोधमा उनी पनि खुलेर विरोध गर्ने व्यक्ती मध्येका एक हुन ।